लोडसेडिङ अन्त्य, प्राधिकरणको नाफा र कुलमान हाैवा - UrjaKhabar लोडसेडिङ अन्त्य, प्राधिकरणको नाफा र कुलमान हाैवा - UrjaKhabar
लोडसेडिङ अन्त्य, प्राधिकरणको नाफा र कुलमान हाैवा
काठमाडाैं । उज्यालोको अगाडि अन्धकारको आलोचना जीवनका हरेक पाटाहरूमा स्वाभाविक हाे । यसलाइ तार्किक नै मान्नुपर्छ । यदि, त्यसो हो भने नेपाली जनजनमा, सामाजिक सञ्जालका भित्तामा, चिया गफमा कुलमान घिसिङको चर्चा अपरिहार्य छ । जायज छ ।
एउटा सरकारी स्वामित्वको संस्थानको प्रमुख, जसको हैसियत एउटा राष्ट्रभित्र ‘खासै’ केही हुँदैन । तर, विशिष्ट श्रेणी नियुक्तिको त्यो पद, त्यो व्यक्तित्व पछिल्लो चार वर्षमा नजानिँदो तरिकाले “नायक’ घाेषित भयाे । एउटा कर्मचारीलाई बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जालको शक्तिले शिखरमा पुर्याइरहँदा ‘रोमाञ्चक’ अनुभूति त पक्कै हुँदो हो ।
साथै, त्यसले उत्पन्न गर्ने ‘महत्त्वाकांक्षा’ले स्वयम् उसलाई कति ‘ब्याक फायर’ हुँदो हो यो एउटा खोजको बिषय बन्छ नै । तर, यो भन्दा पर उज्यालो-उज्यालो भन्दै गर्दा त्यहि उज्यालोमुनिकै अँध्यारो शंका मुखरित भइरहेकाे छ । घिसिङका योगदानको चर्चा सँगसँगै कतै न कतै उनको ‘देवत्वकरण’ भएको हो कि भन्ने भाव तीखो सुनिन थालेको छ ।
कुलमानले लोडसेडिङ अन्त्य र संस्थान नाफामा लगेकाे ‘जस’को पहाड सर्वत्रबाट बोकिरहँदा समकालीन राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वप्रशासकहरू चाँहि सामाजिक सञ्जालमा बोल्न र लेख्न सक्ने जति गाली र बेइज्जतिपूर्ण ‘अपजस’को भागिदार भइरहेका छन् । बनिरहेका छन् ।
हाम्रो जस्तो देश, यति धेरै राजनीतिक दवाब अनि राजनीतिक नियुक्तिको ‘कार्यकारी निर्देशक’ पद । यी सबै अवस्थामा कुलमानले मात्रै जस पाउने अरू जम्मैले अपजस पाउने अवस्था तथ्यगत हो या मानिसका अल्पबुझाईको एकपछि अर्को शृंखला मात्रै हो ? यो प्रश्नको उत्तर यो आलेखमा कोर्ने जमर्को गरेको छु ।
विशेष गरी लोडसेडिङ अन्त्य तथा संस्थानको नाफाको सन्दर्भमा उपलब्ध तथ्यहरूलाई अझ मसिनो पारी त्यसका अन्तर्य र अर्थहरू खोतल्ने प्रयोजनको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरेक वर्ष उसको वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनको सहायता लिएको छु । ती प्रतिवेदनहरू प्राधिकरणको वेबसाइटमा सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
लोडसेडिङ र यसको व्यवस्थापन
सन् १९९९ सम्म लोडसेडिङले गाँजेको नेपालको प्रणालीमा खिम्ती जलविद्युत् अायाेजना जोडिएपछि करिब आधा दशक अटुट बिजुली बालियाे । त्यसपछि क्रमिकरूपमा बढ्दै १६ घन्टासम्म विद्युत् कटौती खेप्नुपरेको थियो, जुन २०१८ मेसम्म कायम रह्यो ।
यसबीचमा प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति भयाे । २०७३ को तिहारमा काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गर्दै गरियाे । क्रमिकरूपमा विभिन्न शहर हुँदै देशैभरि लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको थियो ।
त्यसपश्चात प्राधिकरण, लोडसेडिङ अन्त्यलगायत विषयमा धेरै चर्चा, परिचर्चा टडकारो रूपमा सुनियाे । ती मध्ये सबैलाई आक्रोसित गराउने कुरा चाहिँ विगतमा बिजुली लुकाएको, कमिसन लिएर उद्योगलाई बत्ति दिएर जनतालाई अँध्यारोमा राखेको भन्ने प्रसङ्ग थिए । जुन एकदमै स्वभाविक नै थिए ।
एकाएक बिजुली व्यवस्थापनको सफलताको लागि तत्कालीन सरकार, मन्त्री सबैले जस लिने क्रम अहिलेसम्म नै जारी छ । हाल आएर विभिन्न मान्छेका विपरित तर्क पनि विस्तारै सुनिन/देखिन थालेको छ ।
खास के भएको हो भन्ने जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविक थियो । लोडसेडिङ जारी रहेको अन्तिम बेला कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले थिए । यहाँ उनकाे कार्यकालको अन्तिम वर्ष २०७२/७३, लोडसेडिङ अन्त्य भएको र त्यसपछिका केही वर्षका मुख्य सूचकहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।
१.१. बिजुलीको उपलब्धता (Availability of Energy)
माथिको विवरण अनुसार मुकेश काफ्लेको बहिर्गमन भएको वर्ष प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत् परिमाण करिब ५१०० गिगावाट घन्टा थियो । कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भई काठमाडाैं उपत्यकामा लोडसेडिङ हटेको वर्ष उपलब्ध विद्युत् परिमाण करिब ६२५७ गिगावाट घन्टा थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ११५७ गिगावाट घन्टा बढी हाे ।
यसरी वर्ष दिनमा बृद्धि भएको विद्युत् हिस्सामा नेपालभित्रै निजी आयोजनाहरूकाे उत्पादन ५२% तथा भारतबाट बढी आयात गरिएको बिजुलीले ३७% ओगटेको थियो । त्याे समय प्राधिकरणकाे उत्पादन नगन्य मात्रामा बढेको थियो ।
सोही वर्ष देशभित्र निजी प्रवर्द्धकबाट ५० मेगावाटकाे अप्पर मर्स्याङ्दी ग्रिडमा जोडिँदा काठमाडाैंको लोडसेडिङ हटाउन ठूलो सहजता आएको थियो ।
उक्त आयोजनाको विद्युत् सेप्टेम्बर २६, २०१६ अर्थात् कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएको १५ दिनभित्रै उत्पादन भएको थियो । जुन आयोजनाको विद्युत् मर्स्याङ्दी काेरिडोर प्रसारण लाइनबाट प्रवाह गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियाे । तर, प्रसारण लाइन निर्माण समयमै हुन नसक्दा आयोजनाको बत्ति खेर जान नदिन हतार-हतार भुलभुले-मध्यमर्स्याङ्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको थियो ।
यतिमात्र होइन, बिजुलीको उपलब्धताको सन्दर्भमा त्यसपश्चात २०७५ सालको भदाैमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार उपलब्ध बिजुली परिमाण ७०५७.८० गिगावाट घन्टा पुगेकाे थियाे । यतिबेला त्यो बृद्धिकाे लगभग पूरै हिस्सा भारतीय बिजुली र नेपालका निजी पावरहाउसमा उत्पादित बिजुलीले ओगटेको पाइन्छ ।
दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण २ वर्षमा प्राधिकरणले आफ्नो उत्पादन बृद्धि नगन्य मात्रामा गरेको थियो । तर, त्यसपश्चातको २ वर्ष चमेलिया (३० मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) निर्माण सम्पन्न भए । साथै, अन्य पावर हाउसको सन्तोषजनक उत्पादनले प्रणालीमा उपलब्ध बिजुलीको बृद्धिकाे राम्रै हिस्सा प्राधिकरण स्वयम्ले लिएको देखिन्छ ।
१.२ प्रणालीमा उच्चतम विद्युत् मागको अवस्था (Peak Load Demand Trend) ः हुन त, पिक डिमाण्डको ट्रेन्डले सम्पूर्ण लोडसेडिङको अवधिको आकलन हुँदैन । तैपनि, हाम्रो जस्तो बिहान बेलुका उच्च माग हुने प्रणालीमा यसको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन । साथै, Peak load को व्यवस्थापन नहुँदा नै लोडसेडिङ हुने हो । त्यसकारण, पछिल्ला ४ वर्षमा उपलब्ध विद्युत्काे अनुपातमा पिक लोडमा कति बृद्धि भयो र त्यसले लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा कस्तो प्रभाव पार्यो ? याे निम्न तालिकाले प्रस्ट पार्छ ।
माथिको तालिका हेर्दा २०७३ सालदेखि २०७४ सालसम्म पिक डिमाण्डमा करिब सवा चार प्रतिशतको बृद्धि देखियाे । उक्त अवधिमा करिब २३% ले बिजुलीको उपलब्धता बढेको देखिन्छ । यसरी नै २०७५ सालमा समेत पिक डिमाण्डमा करिब साढे चार प्रतिशतको बृद्धि हुँदा उक्त अवधिमा करिब १३% ले बिजुलीको उपलब्धता बढेको देखिन्छ ।
अझ पछिल्लो वर्षमा त झन् पिक लोड १२% ले घटेको देखिन्छ । यसरी चार वर्षमा समग्र १.६३% ले बढेको पिक डिमाण्ड बढेकाे छ । साेही अवधिमा विद्युत् उपलब्धता करिब ५२% ले बृद्धि भएको देखिन्छ । यसले पनि लोड व्यवस्थापन गर्न सजिलो/असजिलो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पिक लोड व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले विभिन्न स्रोतबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको उसकै प्रतिवेदनमा पाइन्छ ।
माथिको तालिका हेर्दा, घोषणा जहिलेसुकै भए पनि काठमाडौं खाल्डोलाई मात्र नेपाल होइन भन्ने तथ्य स्विकार्दा कम्तीमा २०७४ कात्तिक २ गते साँझ ६:३५ बजेसम्मै करिब ३५० मेगावाट बराबरको लोडसेडिङ यथावत थियाे । साथै, पाँचै वर्षहरूमा भारतीय बिजुलीको ठूलो हिस्सा पिक लोड व्यवस्थापनमा प्रयोग भइरहेको पनि छर्लङ्ग देखिन्छ ।
यतिमात्र होइन पिक लोड व्यवस्थापनमा ढल्केवर-मुजफ्वरपुर् ४०० केभी प्रसारण लाइनको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ । गत बर्ष (२०७६) को पिक लोड व्यवस्थापन गर्न भारतबाट ल्याइएको करिब ४५० मेगावाटमध्ये २५० मेगावाट बिजुली त्यही लाइन हुँदै ल्याएको छ ।
स्मरण रहोस्, अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको रूपमा निर्माण गरिएको ढल्केवर-मुजफ्वरपुर् लाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि अझैसम्म ४००/२२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । तथापि, अगस्ट २०१८ (भाद्र २०७५ ) मा २२० केभीमा चार्ज गरी भारतबfट बढीभन्दा बढी बिजुली आयात गरेको देखिन्छ ।
यसरी, सोही लाइन सुरुमा १३२ केभीमा चार्ज गरी ८० मेगावाट आयात गरिएको थियाे । पछि २२० केभीमा चार्ज गरी २५० मेगावाटसम्म सोही लाइनबाट आयात गरियाे । करिब १७५ मेगावाटमा सीमित भारतीय बिजुली करिब ५०० मेगावाटसम्म पुर्याइएको देखिन्छ । यसरी नेपालको प्रणालीमा प्रशस्त भारतीय बिजुलीको उपलब्धताको बाटो ढल्केवर-मुजफ्वरपुर् प्रशारण लाइनले खोल्नुका साथै पिक लोड व्यवस्थापनमा सञ्जिवनीको काम गरेको देखिन्छ ।
बिजुलीको उपलब्धता (Availability of Energy) र उच्चतम माग (Peak Load Demand Trend)
१. लोडसेडिंग कसरी हट्यो त ?
– पक्कै पनि नेपालका निजी कम्पनी (मुख्य गरी अप्पर मर्स्याङ्दीकाे ५० मेगावाट) र भारतले प्राधिकरणलाई बेचेको बिजुलीको कारणले !
२. अघिल्ला वर्षहरूमा किन सम्भव भएन ?
– अघिल्ला वर्षहरूमा भारतीय बिजुली आयात गर्ने पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नभएको तथा निजी क्षेत्रको बिजुली पर्याप्त नरहेको कारणले !
यद्यपि, उपलब्ध बिजुलीको राम्रो व्यवस्थापनका साथै भारतीय बिजुली किन्ने निर्णय गराउन सफल भई जनताले झेलेको अध्यारो युग कुलमानले अन्त्य गरेकै हुन् । जसको ठूलो जस तत्कालीन प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीहरू विशेषत: जनार्दन शर्मा लगायत घिसिङ र सम्पूर्ण कर्मचारीलाई पक्कै जान्छ ।
२. प्राधिकरणको नाफा : स्वाभाविक या कुलमानको चमत्कार ?
लोडसेडिङ सँगसँगै कुलमान घिसिङले खुबै जस पाउने अर्को विषय प्राधिकरणको बढ्दै गएको नाफा हो । लगतार नोक्सानमा रहेको प्राधिकरण २०७३/०७४ देखि नै नाफामा गएको देखिन्छ ।आलोचकहरूले २०७३ सालदेखि लागू भएको नयाँ विद्युत् महसुल दरलाई नाफाको जिम्मेवार ठहर्याउने गरेका छन् ।
तर, घिसिङकाे नेतृत्वमा प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षमा चुहावट नियन्त्रणमा मारेको ठूलो फड्को पनि नाफाको कारण रहेकाे सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । खासमा नयाँ महसुल दर र चुहावट नियन्त्रणले प्राधिकरण नाफामा कति हिस्सा लिएको छ त ? यसलाई निम्नानुसार तथ्यले प्रष्ट पार्न सकिन्छ ।
(नोट : यस तुलनात्मक चार्टमा operating surplus लाई आधार मानिएको छ । किनभने सञ्चालन खर्चबाहेकका दायित्व (संस्थाले तिर्ने ब्याज, डलरको मूल्यबृद्धि) हरू अधिकतम अवस्थामा प्राधिकरणको व्यवस्थापनकाे काबुबाहिरका चिज हुन्)
माथिको तालिका अनुसार २०७३ सालमा घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछि नाफामा गएको देखिन्छ । आव २०७२/७३ मा एक युनिट बिजुली चुहावट नघटाई १५% बढी फाइदामा बेच्ने गरेको प्राधिकरणले लगत्तै अर्को वर्ष करिब ४०% नाफासहित बेचेको देखिन्छ । जुन गत आवमा ४७% सम्म पुगेको छ ।
यसरी हेर्दा नयाँ महसुल दरले प्राधिकरणको नाफामा मुल रूपमा योगदान गरेको जस्तो देखिन्छ । तर, २०७४ सालपछि चुहावटमा गरिएको उल्लेख्य नियन्त्रणले पनि मुख्य भूमिका खेलको कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु मुर्खता हुनेछ ।
विगत ५ वर्षको चुहावटको विवरण यसप्रकार छ :
वर्ष (हरेक वर्षको भदाैसम्म) २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ २०७७
चुहावट दर २५.७८ % २२.९०% २०.४५% १५.३२% १५.२७%
स्राेत : नेविप्रा
माथिको तालिका अनुसार २०७३ सालमा २५.७८% रहेको चुहावट २०७७ सम्म आइपुग्दा १५.२७% मा झरेको छ । जसको ठूलो योगदान प्राधिकरण फाइदामा जानुमा परेको देखिन्छ । तर, हालै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा पूर्वकार्यकारी निर्देशकले ‘आफ्नो पालामा (२०७३ सालमा) नोक्सानमा रहेको सस्था कुलमान कार्यकारी निर्देशक भएपछि २०७४ सालमा एकाएक नाफामा जानुको कारण नयाँ विद्युत् महसुल हो’ भन्ने दाबी गरेका थिए ।
के उनको यो दाबी सही हो त ? यसका लागि २०७३ सालपछि लागू गरिएको नयाँ महसुल दर नभएकाे भनेर मान्ने हो भन्ने कुलमान कार्यकालको पहिलो वर्ष नाफा हुन्थ्यो या घाटा ?
यसरी निकाल्न सकिन्छ :
बिक्री विद्युत् युनिट औसत पुरानो महसुल दर पुरानो दरअनुसार आम्दानी औसत नयाँ महसुल दर नयाँ दरअनुसार आम्दानी फरक त्यस वर्षको यथार्थ Operating Surplus
४७७६ GWh ८.७३ ४१.६२ अर्ब १०.०० ४७.७६ अर्ब ६.१४ अर्ब ६.७१८ अर्ब
यसरी, माथिको तालिकाले रोचक आँकडा दिएको छ । जसअनुसार अरू सबै चिज यथावत रहेको खण्डमा पुरानो महसुल अनुसार प्राधिकरणको सञ्चालन बचत (Operating Surplus) करिब ६.१४ अर्ब रुपैयाले घट्ने थियो । जुन यथार्थ Operating Surplus ६.७१८ अर्ब रुपैयाँ वरिपरि हो ।
साथै, २ अंकमा रहेको फरक करिब ५८ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले त्यो आवमा चुहावट नियन्त्रणबाट कमाएको भन्न सकिन्छ । यसरी कम्तीमा कुलमानको पहिलो वर्षको नाफाको लगभग सबै हिस्सा बढेको विद्युत् महसुलले ओगटेको भन्न सकिन्छ । तर, यहाँनिर चुहावटको आँकडा म्यानुपुलेट गरिएको भन्ने हल्ला पनि बेलाबखत सुन्न पाइन्छ । त्यो भविष्यमा आउने थप अध्यानहरूले प्रष्ट पार्लान् ।
अन्त्यमा, विज्ञान र प्रविधिको युगमा मानिसहरूले धेरै चमत्कार गरेका छन् । आफ्ना सामान्य दायित्वसमेत पूरा गर्न नसक्ने सरकार, नेता/कार्यकर्ता तथा कर्मचारी बर्गले आमनागरिकलाई धेरै निराश बनाएका छन् । त्यसैले, कुनै मान्छे आएर आफ्ना सामान्य कर्तव्य पूरा मात्रै गरिदियो भने पनि उसको कार्यलाई नागरिकले ‘चमत्कार’ को दर्जामा राख्छन् ।
किनकि उनीहरुलाई ‘कसरी र कहाँबाट’ भन्ने प्रश्नले खासै फरक पार्दैन । हाम्रो देशमा पनि सायद यस्तै भएको हुनुपर्छ । अन्धकारमा सास्तिपूर्ण जिन्दगी बाच्नेहरुका लागि कुलमानहरू भगवान हुन् । र, उनीहरूको तस्बिर चोकचोकमा टास्ने र गीत गाइने गरिन्छ ।
तर, यसरी एउटा उदाहरणलाई मानक बनाएर सम्पूर्ण प्रणालीमाथि एउटा व्यक्तिको अपरिहार्यता ‘ओभरल्याप’ गर्नु कालान्तरमा तिनै नागरिक, स्वयं व्यक्ति र प्रणालीलाई हानिकारक हुन्छ । साथै, प्राधिकरणका सफल कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रशंसामा चुर्लुम्मै पारिराख्दा पूर्वऊर्जा मन्त्रीहरू, कार्यकारी निर्देशकहरूलाई हुनुसम्मको घोर अपमान र गालीगलौज कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन, यो सम्भ्य भनिएको समाजमा ।
अझ अचम्म र उदेक लाग्ने पक्ष चाहिँ के छ भने ठूला ठालू हुँ भन्ने बुद्धिजीवीहरूले समेत सामान्य अध्ययन नगरी ‘मुकेश काफ्लेलाई फाँसी दे’ भन्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरू सेयर गर्दै बसेका छन् । सत्य सधैभरि सत्य नै रहन्छ वा यसको सत्यता प्रमाणित हुन अलि समय लाग्न सक्छ ।